Izindaba - Kungani usebenzise i-carbon fiber plate?
Kungani kufanele usebenzise i-carbon fiber plate?
Ibhodi le-carbon fiber lenziwe ngendwangu ye-carbon fiber ne-epoxy resin.Ingenziwa ibe amabhodi e-carbon fibre enobukhulu nobukhulu obuhlukene ngokwezidingo zamakhasimende.Imvamisa, isisindo sebhodi le-carbon fibre board singaphansi kwe-1/4 yezinto zensimbi, ezinikeza ukukhetha okungcono kumakhasimende amaningi athanda ukuzilibazisa kwe-RC.
Amandla aphezulu nokuqina
Isilinganiso samandla ezinto ze-carbon fibre kuya kokuminyana singafinyelela ku-2000Mpa/(g/cm3), kuyilapho impahla yensimbi ingafinyelela ku-59Mpa/(g/cm3 kuphela).Ngokuphambene, imikhiqizo ehlukahlukene eyenziwe nge-carbon fiber (amabhodi e-carbon fibre, amashubhu e-carbon fibre, ifenisha ye-carbon fibre, ama-drones, izinsimbi zomculo ze-carbon fibre, njll.) iye yathandwa abantu abaningi.
Ukumelana Nokugqwala Namakhemikhali
Imikhiqizo ye-Carbon fiber yenziwe ngendwangu ye-carbon fibre ne-epoxy resin ngokusebenzisa izinga lokushisa eliphezulu nokucindezela okuphezulu.I-epoxy resin akulula ukugqwala noma ukugqwala.Ikhabhoni ekwi-carbon fiber inamandla ngokwedlulele futhi imelana ne-oxidation.Amanye amakhasimende akhetha ukuyisebenzisa ezindabeni zasolwandle.Iphinde inwebe imakethe yokusetshenziswa kwe-carbon fiber.
Ngenxa yezakhiwo ezisezingeni eliphakeme ze-carbon fiber, indlela yokukhetha i-carbon fiber ephezulu ibaluleke kakhulu:
1) Ishidi le-Carbon fiber ngokuvamile lakhiwa ngendwangu ye-UD nendwangu engu-3K.Indwangu ye-UD idinga ukwenziwa umkhiqizo we-carbon fiber ohlangabezana nendinganiso enombala omnyama nobushelelezi, ukumelana nokushisa okuhle nokumelana nokugqwala.
2) Abakhiqizi abahlukene emakethe bangase babe nobuciko obuhlukile, futhi bangase babe nezinto zokusetshenziswa ezifanayo, kodwa futhi kuzoba nemikhiqizo yekhwalithi.Lapho uthenga, kufanele ukhethe amabhodi e-carbon fibre engabizi kakhulu, ukuze ikhwalithi yemikhiqizo yamakhasimende iqinisekiswe ngokunembile.
3) Imikhiqizo eyaziwayo kanye namaqembu ezobuchwepheshe abalulekile.I-carbon fiber ye-Feimoshi iwumkhiqizo ongabizi kakhulu owenziwe ngendwangu yekhabhoni engenisiwe kanye nenhlaka.
4) Iqembu langemva kokuthengisa lidlala indima ebaluleke ngokulinganayo.Inkampani yethu inethimba lezobuchwepheshe elihlinzeka ngesiqinisekiso esinokwethenjelwa ngemuva kokuthengisa emikhiqizweni yamakhasimende.Noma yiziphi izinkinga zekhwalithi zizothwalwa yithi.